Isboortiga – Somali Sounds
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa labadii tababare ee kooxdooda Liverpool kula soo dhawaaday ku guulaysiga koobka Premier league waxay ka doonayaan in ay asxaan u sameeyaan waxayna kala yihiin tababarayaasha kooxaha Leicester City ee Branden Rogers iyo Rafa Benitez oo hogaaminaya Newcastle United. Labada nin ayaa kala hogaamiya Kooxaha Leicester City iyo Newcastle United waana macalimiintii […]
Kulankii ay Liverpool guusha ka soo gaartay kooxda Cardiff City waxaa dhexda ugu jiray kabtanka Cardiff ee Sean Morrison kaas oo sameeyay dhacdooyin hadal hayn badan keenay. Laakiin jamaahiirta Premier league ee aan doonayn in ay Liverpool koobka ku guulaysato ayaa soo jeediyay in Sean Morrison uu kooxda Reds ka caawiyay in ay saddexda dhicbood […]
April 18, 2019 April 18, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
April 14, 2019 April 14, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
April 12, 2019 April 12, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Macalinka Kooxda Ajax Amsterdam Erik den Hag ayaa sheegay in xiddiga hogaamiya kooxda Ajax uu ku biiri doono laba kooxood midkood ayadoo aysan jirin fursad uu Ajax kaga mid ahaan doono xagaaga kadib. Macalinka ayaa sheegay in Kooxaha Barcelona ama Bayern Munich midkood uu ku biiri doono 19 sano jirkaas heerka caalami ee dalka Holland. […]
April 11, 2019 April 11, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Barcelona ayaa guul muhiim ah Old Trafford kaga soo gaartay dhigeeda Manchester United kulankii lugta hore ee siddeed dhamaadka UEFA Champions league. Gool uu Luka Shaw iska dhaliyay isla markaana uu Luis Suarez sabab u noqday ayaa keenay in Man United ay guuldaro ku soo gaartay. Lugta todobaadka dambe ayay Barcelona qabtaa kalsooni buuxdo taas […]
United ayaa caawa garoonkeeda Old Trafford kusoo dhoweynaysa Barcelona oo lugta hore ay albaabada iskugu xidhan doonaan gegida xamaasadda ee sida quruxda badan loogu qaabeeyey in daawadeyaashu ay si isku cabbir ah u daawadaan dusha sare illaa sakadda ugu hoosaysa. Labada Kooxood ayaa wareega 16-ka kaga soo kala garaacay labada Kooxood ee reer France Lyon […]
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta ayaa shaaciyay in xulka qaranka Soomaaliya ay u magacaabeyn Bashir Hayford oo u dhashay dalka Ghana wuxuuna xilka ka badalay Macalin Maxamed Cabdulle Farayare oo ahaa hogaamiyihii hore xidigaha xulka. Tababre Hayford ayaa ciyaartoooyda Xulka Qaranka Soomaaliya u bilaaway tababarka ay iskugu diyaarinaynaa tartmada ay ka qeyb galayaan sanada 2019 […]